Melbourne, Victoria, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Chammy
Itholakala kahle endaweni yase-Paris-End ye-Melbourne CBD, ekhoneni le-Flinders kanye ne-Exhibition Streets enokubukwa okugcwele kuyo yonke i-Botanical Garden, indawo yezemidlalo ye-MCG nangale kwayo.
Amafasitela acwebezelwe kabili okuthula okuthe xaxa nokuzola phakathi kwe-buzzle !!!
Itholakala kalula eduze kwesitobhi sethilamu, uhambo olufushane oluya eFederation Square, Fitzroy Gardens, MCG kanye nendawo yezemidlalo, izindawo zokudlela ezikuFlinders Lane nakho konke okuhlinzekwa yiMelbourne.
Indawo yokudlela ekhanyayo futhi enomoya omkhulu evulekile nendawo yokuhlala enekhishi elihlome ngokuphelele. Igumbi lokulala elinombhede olingana neNdlovukazi kanye nokucwebezela okuphindwe kabili, indawo engcwele yangempela ngaphakathi kweMelbourne CBD ebabazayo!
4.70 ·96 okushiwo abanye
4.70 · 96 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Melbourne namaphethelo